ဒီရက်ပိုင်း covid ကာလမှာ အလုပ်တွေကလည်း မယ်မယ်ရရ လုပ်စရာသိပ်မရှိဘူး။ ကိုယ့် Product နဲ့ပတ်သတ်ပြီး campaign တွေလည်းသိပ်မလုပ်ဖြစ်ဘူး.... လုပ်လည်းသေးသေးကွေးကွေးဘဲ.... ဘာလို့လဲဆိုတော့ Campaign ကနေပြန်ရတဲ့ ROI က အနုတ်တွေပြနေတော့ ဖြုန်းတီးရာကြမှာဆိုးလို့ ရေလိုက်ငန်းလိုက်ဘဲသွားနေလ်ိုက်တယ်....ကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ Industury နဲ့ market က ဒီကာလမှာအေးနေတာလဲပါတယ်ဗျ။ အဲ့တော့ ကျွန်တော်အားနေတဲ့အချိန်တွေမှာ Hacking Growth ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို ဖတ်ဖြစ်တယ်။
Hacking Growth ဆိုတော့အများကြီး ယူဆလို့ရတယ်... ဥပမာ ကိုယ့်ရဲ့ Product ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ Users တွေတိုးလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ကိုယ့်ရဲ့ Service တွေ premium subscription တွေကို ဝယ်သုံးလာအောင်ဘယ်လို့လုပ်မလဲ? စသဖြင့်ပေါ့။ ကိုယ့် Competitor တွေကို အလဲထိုးပြီး User တွေ revenue တွေတိုးလာပြီ Market share အများဆုံးပိုင်အောင် Product ပိုင်းကနေ ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ ဒီစာအုပ်မှာရေးထားတယ်။ လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ categories ခွဲပြီး Strategic plan အမျိုးမျိုးနဲ့ User ကိုကိုယ့် Product တွေ Service တွေအသုံးပြုချင်လာအောင် လုပ်သွားတဲ့အကွက်တွေက တော်တော်မိုက်တယ်။
စာအုပ်ကိုရေးတဲ့ Sean Ellis က https://growthhackers.com/ ဆိုတဲ့ blog ရဲ့ Founder ။ ပြီးတော့ သူ Dropbox မှာ လုပ်နေတဲ့အချိန်က Referral Methodology သုံးပြီး User base ကို အဆများကြီးတိုးသွားအောင်လုပ်တဲ့ အကွက်ကတော့အကြမ်း။ အဲ့တုံးက Referral က PayPal အရင်စလုပ်တာ။ သူလဲအောင်မြင်တယ်။ Dropbox က referrel လုပ်မယ်ကြားတော့ Elon Musk လေးတိုက်တာခံရသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ Dropbox ရဲ့ Strategic Plan ကပိုကောင်းတော့ paypal ထက်ပိုအောင်မြင်သွားတယ်။
အဲ့လိုဘဲ တစ်ခြား Startup Growth hacking တွေဖြစ်တဲ့ Facebook တို့ Torrent, Airbnb, Uber, Slack တို့ရဲ့အကြောင်းတွေလည်းပါတယ်။ Business ဘက်ကို ယိမ်းတဲ့ Product Manger တွေဖတ်သင့်တယ်လို့ထင်လို့ ရှယ်လိုက်တာပါ။ https://growthhackers.com/ blog မှာလည်း post တွေတင်ပြီး discuss လုပ်လို့ရတယ်။ ကိုယ့်အမြင်သူ့အမြင်သိချင်ရင် discuss လုပ်လို့ကောင်းတဲ့ နေရာတစ်ခုပါ။